အမေ ရိကန်သမ္မတ စီးပွားရေး သမားကြီး ဒေါ်နယ်ထ ရမ့် ကိုင်လှု ပ်ခဲ့သော အရာ များ – Shwewiki.com
အမေ ရိကန်သမ္မတ စီးပွားရေး သမားကြီး ဒေါ်နယ်ထ ရမ့် ကိုင်လှု ပ်ခဲ့သော အရာ များ
အေ မရိကန်သမ္မတ ​ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလူလည်၊ စီးပွား​ရေးသမား .. သူသမ္မတဖြစ်လာဖို့လည်း သူ့ရှိတဲ့ စည်းစိမ် အချို့ပုံ​အောပြီးရ​အောင်ယူခဲ့တယ်လို့ မှတ်သားဘူးတယ် ..
သမ္မ တစဖြစ်လာတဲ့ 2016 ခုနှစ်ကတည်း က စီးပွား​ရေးသမားပီပီ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ လူစိတ်အဝင်စားဆုံး​သော​ အ​ကြောင်းအရာ ​တွေကိုချည်း စပြီးကိုင်တွယ်ခဲ့တာ …
ထရမ့်ကြီး သမ္မတဖြစ်ခွင့်ရ​​​တော့ မြန်မာ ပြည်တွင်းက အမျိုးသား​ရေးဆိုတဲ့ င​ပေါ​ငကြောင်​​တွေ ထပြီးလက်ခ​မောင်းခတ် လိုက် ကြ​သေးတယ်၊ သူတို့လို ထရမ်ကြီးက အမျိုးသား​ရေးဝါဒီသမားကွဆိုပြီး …
​နောက်​တော့ ထရမ့်ကြီးရဲ့ စီးပွား​ရေးသမား ပီပီ သူ့နိုင်ငံ သူ့စီးပွား​ရေးဘဲကြည့်တတ်သူ မှန်းသိလာကြ​​တော့မှ အမျိုးသား​ရေး ဝါဒီသမား​တွေ အသံတိတ်သွားတယ် …
ထရမ့်ကြီးကို သ​ဘောကျတာက ​ခေတ်ကာ လအဆက်ဆက်မှာ ဘယ်အ​မေရိကန် သမ္မတမှ မလုပ်ခဲ့တာ​တွေကို ပြတ်ပြတ် သားသားထလုပ်ပြနိုင်ခဲ့တာ​​တွေဘဲ …
နယ်နမိတ်ခြင်းထိစပ်​နေတဲ့ မက္ကစီကို နယ်ခြားကို အုပ်တံတိုင်းကာပစ်လိုက်တယ်။ နိုင်ငံထဲ​ရောက်လာ​နေတဲ့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က ဒုက္ခသည်ဆိုသူ​တွေကို နိုင်ငံသား​ပေးခဲ့ခြင်း ခွင့်ပြုခြင်း​တွေကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်သလို ရှိ​နေပြီးသားသူ​တွေကိုလည်း နိုင်ငံသား စီစစ် ဖို့ထက် ပြန်​​မောင်းထုတ် ခဲ့တယ် …
အာရှလူစွာ ​မြောက်ကိုရီးယား ဝက်ပုပ်​လေး ကိုအပိုးကျိုးသွား​အောင် ပညာ​ပေးခဲ့သလို စီးပွား​ရေးအရှိန်အဟုန် မြင့်တက်လာ​နေတံ့ တရုပ်ကြီးကိုလည်း ဂုတ်ပိုးဖြတ်ရိုက်ခဲ့တယ် လက်တင်အ​မေရိက နိုင်ငံ​​​တွေကို ဆွထား​ပေးခဲ့ပြီး ဥ​ရောပနဲ့အာရှအ​ရှေ့အလယ်ပိုင်း ကိုပတ်​​မွှေ​ပေးခဲ့တယ် …
အာရှရဲစီးပွား​ရေး ကျား​​တွေကို ​လှောင်အိမ် ထဲသွင်း ၊ အမြီးကုပ်​စေခဲ့သလို စစ်​ရေး သ​ဘောထားတင်းမာတဲ့ စစ်ဝါဒီ​​တွေကို နှာနု ဖြတ်ရိုက်ပြလိုက်​သေးတယ် … သမုဒ္ဒရာကြီး နှစ်စင်းကို အပိုင်စီးထားတယ် ပစိဖတ်နဲ့ အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာ​တွေကို … ဒါ​တွေအားလုံးဟာ ထရမ့်ကြီး ကျည်တစ် ချက်မှမဖာက်ဘဲ လိုတိုး ပို​လျှော့ စီးပွား တွက် တွက်ပြီး စူပါ ပါဝါနဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို စိတ်တိုင်းကျ ကိုင်လှုပ်သွားတာဘဲ …
UN လို ကမ္ဘာအကြီးဆုံးအဖွဲ့အစည်းကြီးကို ထရမ့်က နှတ်ခမ်းဆွဲဆိပ်ပြီး အသံတိတ်​အောင်လည်းလုပ်ပြနိုင်ခဲ့တယ် …
အ​မေရိကန်သမ္မတ ​ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကြီး ကမ္ဘာပတ်စိတ်တိုင်းကျ စူပါ ပါဝါပြပြီး စိတ်တိုင်းကျ လုပ်ချင် ရာလုပ်ပြီးမှ စီးပွား​ရေးသမား ပီပီအမြတ် အစွမ်းများတဲ့ နည်းပညာနဲ့ ဆရာစားချန် လက်နက်​​ရောင်းဝယ်​ရေး​​ဈေးကွက်ကို ကမ္ဘာပတ် အ​ရောင်းမြှင့်တင်ခဲ့တာ​တော့ ချီးကျူးဖို့ အလွန်​ကောင်းတဲ့ ကမ္ဘာ့အ​တော်ဆုံး စီးပွား​ရေး သမားကြီးလို​ခေါ်လို့ ရတယ် ….
​ကမ္ဘာ​ပေါ်မှာ အ​​တော်ဆုံး အချမ်းသာဆုံး စီးပွား​ရေးသမား​တွေ​တောင် ထရမ့်ကြီး ​ခြေဖျား​​တောင်မှီမယ်မထင်ဘူး …
စီးပွား​ရေးလုပ်ငန်းမှာ ဘယ်​လောက်​အောင်မြင်​နေတဲ့ စီးပွား​ရေးသမားဖြစ်ပါ​စေ ထရမ့်ကြီးလို စူပါ ပါဝါ အိပ်ကပ်ထဲ ထဘ့်ပြီး ကမ္ဘာကြီးကို အဖက်ဖက်က ကိုင်လှုပ် နိုင်တဲ့ စီးပွား​ရေးသမားဆိုတာ အ​တော်ရှားပါးတာမို့ …..
အမေရိကန်သမ္မတ ​ဒေါ်နယ်ထရမ့် ဆိုတာ … နိုင်ငံ​ရေးသမားလည်းမဟုတ်ဘူး .. ဘာသာ​ရေးသမားလည်းမဟုတ်ဘူး .. အမျိုးသား​ရေး ဝါဒီလည်းမဟုတ်ဘုး … စစ်လိုလားတဲ့ စစ်ဝါဒီလည်းမဟုတ်ဘူး .. ငြိမ်းချမ်း​ရေးသမားလည်းမဟုတ်ဘူး …. ကမ္ဘာဒုက္ခသည် ကူညီ​ပေးမဲ့ ဂရုဏာသမားလည်းမဟုတ်ဘူး …
အ​မေရိကန်သမ္မတ ​ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဆိုတာ စူပါ ပါဝါကြီးကို လက်ထဲဆုပ်ကိုင်ထားပြီး စီးပွား​ရေးလုပ်​နေတဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးစား နည်းပညာနဲ့ လက်နက်အ​​ရောင်း စီးပွား​ရေးသမား ကြီး သက်သက်တစ်​ယောက်ဘဲ…
Maung Maung Kyaing
…ယူ ကရိန်းခရီးသည်တင်လေယာဉ် ကို မှားယွင်းစွာ ပစ်ချမိကြောင်း အီရန် ဝန်ခံ လိုက်ပြီ
…အ ချို့အရာတွေ က မြန်မာပြည် မှာ စဉ်းစားလို့ကို မရဘူး…